IMilan eya eRoma Ngezitimela ZaseTrenitalia Ku 3 amahora | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > IMilan eya eRoma Ngezitimela ZaseTrenitalia Ku 3 amahora
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 13/07/2020)
Milan eRoma ngu zemininingwane noma eRoma Milan yintfo kube lula futhi kuhleleke. Ingasaphathwa amahle! Ungakwazi ukuthatha isitimela eshibhile okungathatha isikhathi eside ukwedlula 3 amahora kodwa lokho Izitimela ezisuka eMilan ziye eRoma zikuvumela ukuthi ungene e izitobhi kudingekile ukuhlola. Noma ungagxuma esitimeleni esingamaTrenitalia isivinini esikhulu seFreccia, okuyinto ethatha nje 3 amahora 3 amaminithi, okungaphansi kakhulu kohambo oluphelele ngendiza! Noma ngabe yini oyinqumayo lo mhlahlandlela osheshayo uzokusiza ekwenzeni isinqumo esihle kakhulu wena kanye nohambo lwakho!
Izikhangibavakashi ibanga: 297 amamayela
isikhathi Esheshayo: 3h:03m
izitimela Daily: 89
Amathikithi wesitimela weMilan ukuya eRoma aqala kusuka :$51
Kuhle zemininingwane Ticket umhlinzeki: Save A Train of course
Lesi sihloko sabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Ukuvakasha esenziwa Gcina Isitimela Amathikithi Eshibhile Eshibhile Iwebhusayithi Emhlabeni.
Milan Ukuze eRoma ngu zemininingwane & Rome Ukuze Milan ngu zemininingwane: I Ukubukeka kwendawo
Lungela ukuzwa noma ukubona ezinye kwenkundla esimangalisa njengoba wena ukugibela eningizimu ngokusebenzisa Italy Lombardy, Emilia Romagna, futhi Tuscany izifunda. Abaningi AV Umcibisholo Trenitalia siqeqesha stop e Bologna, WasePadua noma Genoa eya eRoma. On the imizila ngokushesha, ngeke kudingeke ukuba ushintsho izitimela. Nokho, uma ojikelezayo esitimeleni lesifunda kancane futhi engabizi, kungase kudingeke ukuze uthumele komunye isitimela kwenye. Uma ungeyena endaweni rush futhi ufuna ukwenza iningi lakho Milan eRoma ngu zemininingwane uhambo, ke ebesingakutusa le ndlela. Nazi avelele!
Nge Milan iyinhloko-dolobha, akumangalisi ukuthi izivakashi zithuthelekela e izigidi zabo Lombardy unyaka ngamunye. Kodwa nangale eyintandokazi imfashini, amaningi ngaphezulu kumele uvakashele izindawo esifundeni Lombardy-Italy bakhalela ababezobahambela.
Kunezinto ezingenakubalwa ukwenza kule ndawo; bencoma lushone izinqaba amachibi olunothile, ngokuvakashela i-violin workshop emadolobheni mlando, being amazed at the art and architecture of Mantua – Lombardy really packs a punch for visitors.
I-Milan eya eMantua ithikithi lesitimela
ITurin eya eMantua ithikithi lesitimela
IPadua ithikithi lesitimela laseMantua
IVenice eya eMantua ithikithi lesitimela
Siyakholwa Emilia Romagna olufana kalula ezikhangayo lodumo ngaphezulu Tuscany futhi Lombardy nokunikezwa ongakhetha temptingly ethengekayo ukudla futhi yokuhlala. Ikona le Milan eRoma ngu zemininingwane uhambo engcono avalelwe ngokombono wethu kodwa futhi eRoma Milan ngesitimela! Jump off kulesi siteshi uhambe ukuhlola!
Bolognia ukuze Modena Izitimela
Venice ukuze Modena Izitimela
Genoa ukuze Modena Izitimela
Florence ukuze Modena Izitimela
Kunezinto eziningi kangaka okumelwe sizenze e Bologna lapho besuka UMilan uya eRoma ngezitimela zaseTrenitalia. Sincoma lokhu njengoba omunye izindawo phezulu ukucabangela nokugxumela ngesikhathi. Climb kwemibhoshongo medieval, incwadi izinkambo kumnandi ukudla. Uma ufuna ukuhlala isikhashana lokhu kwenza isisekelo elikhulu lokuhlola ezinye ezikhangayo esifundeni.
IVenice eya eBologna ithikithi lesitimela
UFlorence ukuya eBologna ithikithi lesitimela
IRoma eya eBologna ithikithi lesitimela
I-Milan eya eBologna ithikithi lesitimela
Ngaphansi 30 Ukugibela ngomzuzu phezu Isitimela esinejubane eliphezulu kusukela Venice, WasePadua ngokuvamile kakhulu bambalala kusukela iningi izivakashi. Nokho, elizenzayo usuku uhambo ezinkulu ezivela Venice, ukunikela siqonde ngezinga elithile umlando ocebile ka umuzi owake waba isigodi enamandla.
Ikhaya e-Italy wesibili enyuvesi endala, eyasungulwa ngo 1222, WasePadua aye wasigcina emkhathini vivacious of idolobha elineyunivesithi, nge piazzas ephapheme ezitaladini arcaded, amaningi amathilomu kanye nemigoqo lapho Spritz ikuyo yonke indawo kuba de rigueur njengoba imimoya usuku ku kusihlwa. Ungaphuthelwa!
Bergamo ukuze WasePadua Izitimela
Ngoba umuntu owayehamba Milan uya eRoma nge Trenitalia Izitimela noma enye indlela ezungeze umzila futhi ecinga egqinsiwe ngokujulile, ngokuvamile unvarnished futhi eyiqiniso ngesibindi nesipiliyoni travel.
Sincoma ukuthi ubheke eGenoa (okuyinto efana Venice yake republic enamandla zasolwandle) abansundu ezikhundleni eziphezulu ngegama Sea Ligurian. Ukunikeza isipiliyoni eluhlaza kakhulu futhi real, umqondo undiluted yomlando, futhi sithola omuzi ocebile art yesigameko kwathi izakhiwo esiphawulekayo. One of the top reasons we enjoy it so much is that kukhona art omkhulu kanye iminyuziyamu kukhona uncrowded! Ungathola imisebenzi nge Caravaggio, van Dyck. Rubens, Durer futhi Veronese ku Palazzo Bianco futhi Palazzo Rosso futhi Ogle nezinye Izwe Elidala yobuciko izimpawu zendawo eziningi, efana iRoyal Palace ne-National Gallery Palazzo Spinola. Kukhona futhi izibonelo ezinhle Genoese School yobuciko, abavelele ekhulwini le-17, ku Palazzo Blanco.
Milan Ukuze eRoma & Rome Ukuze Milan zemininingwane Times
isivinini Trenitalia eziphakeme High Speed (OF) izitimela ushiye Milan Central Station kanye noma kabili ngehora eRoma Termini esiteshini - sekulinganiswa 90 izitimela ngelanga. Bokuqala Trenitalia amahlamvu isitimela Milan Central Station ngesikhathi 5:00 a.m. Isitimela sokugcina eRoma eshiya Milan ngesikhathi 11:18 p.m.
Qaphela ukuthi ngezimpelasonto namaholide ngokuvamile kusho insizakalo kancane njalo nezikhathi ngezinye izikhathi eside travel.
UMilan uya eRoma ithikithi lesitimela
IRoma eya eMilan ithikithi lesitimela
Izinsizakalo Kwizitimela ZeFreccia Phakathi kweMilan <> Rome
Abaningi Trenitalias Frecciargento AV izitimela hambo nsuku zonke phakathi Milan neRoma nje 3 amahora 3 amaminithi, zihamba 155 amamayela / 250 angu ngehora.
Amathikithi wesitimela e-Italy asezingeni eliphakeme anezinto ezinhle kakhulu. Izindawo zokuphehla ugesi esihlalweni sakho ukukhokhisa amadivaysi kanye neWiFi egibele izitimela zakwaFrecciarossa nezamaFrecciargento. Nokho, isinali lizokwehla ngenkathi ungaphakathi Imigudu futhi eziteshini. Ungaba ne-cafe enhle yase-Italy emotweni yokudla kuso sonke isitimela. Kanye inqola ukudla okuletha Ungadla, sandwich, kanye iziphuzo ukuba esihlalweni sakho. Ekupheleni imoto ngayinye, uzothola lwegumbi nenala Racks esitolo umthwalo omkhulu.
Ilungele ukupakisha izikhwama zakho bese uhlola iMilan iya e-Roma Ngezitimela zeTrenitalia noma enye indlela ezungeze – IRoma ukuya eMilan ngesitimela ngaphakathi 3 amahora? Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha, Bhuka amathikithi akho esitimela ngemizuzu ngosizo lwe Londoloza Isitimela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Milan Ukuya eRoma Ngezitimela zeTrenitalia” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/milan-rome-train/ – (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)